44 E mesịa, o nyere onye na-elekọta ụlọ ya iwu,+ sị: “Kpojuo ihe oriri n’akpa ndị ikom ahụ ruo n’ókè ha ga-ebuli, tinyekwa ego onye nke ọ bụla n’ọnụ akpa ya.+ 2 Ma ị ga-etinye iko m, iko ọlaọcha ahụ, n’ọnụ akpa nke ọdụdụ nwa, tinyekwa ego ọka* ya.” O wee mee ihe Josef gwara ya.+ 3 Chi abọọla mgbe a hapụrụ ndị ikom ahụ ka ha lawa,+ ma ha ma ịnyịnya ibu ha. 4 Ha wee si n’obodo ahụ pụọ. Ha agarubeghị ebe dị anya mgbe Josef gwara onye na-elekọta ụlọ ya, sị: “Bilie! Chụwa ndị ikom ahụ, hụkwa na ị chụkwuuru ha wee sị ha, ‘Gịnị mere unu ji were ihe ọjọọ kwụọ m ụgwọ ihe ọma?+ 5 Nke a ọ́ bụghị ihe nna m ukwu ji aṅụ ihe ọṅụṅụ, bụrụkwa ihe o ji amata kpọmkwem ihe ga-eme n’ọdịnihu?+ Ọ bụ ihe ọjọọ ka unu meworo.’” 6 E mesịa, ọ chụkwuuru ha wee gwa ha okwu ndị a. 7 Ma ha sịrị ya: “Gịnị mere onyenwe m ji ekwu ụdị okwu a? Tụfịakwa! Ndị ohu gị agaghị eme ihe ọ bụla dị otú a. 8 Lee, anyị si n’ala Kenan weghachiri gị ego anyị hụrụ n’ọnụ akpa anyị.+ Oleezi otú anyị ga-esi zuru ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo n’ụlọ nna gị ukwu?+ 9 Ka onye ọ bụla n’ime ndị ohu gị a hụrụ ya n’akpa ya nwụọ, ka anyị onwe anyị kwa bụrụ ndị ohu nna m ukwu.”+ 10 O wee sị: “Ka ọ dị kpọmkwem otú unu kwuru.+ Ya mere, ọ bụ onye a hụrụ ya n’akpa ya ga-aghọrọ m ohu,+ ma unu onwe unu ga-abụ ndị aka ha dị ọcha.” 11 Onye ọ bụla n’ime ha wee butuo akpa ya ọsọ ọsọ, onye ọ bụla n’ime ha meghekwara akpa ya. 12 O wee chọọ ya nke ọma. Ọ malitere na nke okenye wee kwụsị na nke ọdụdụ nwa. N’ikpeazụ, a hụrụ iko ahụ n’akpa Benjamin.+ 13 Ha wee dọwaa ákwà mgbokwasị ha,+ onye nke ọ bụla wee buru ibu ya bugoghachi n’elu ịnyịnya ibu ya wee laghachi n’obodo ahụ. 14 Juda+ na ụmụnne ya wee banye n’ụlọ Josef, ọ ka nọkwa n’ebe ahụ; ha wee daa n’ala n’ihu ya.+ 15 Josef wee sị ha: “Ụdị omume a unu mere bụ gịnị? Ùnu amaghị na nwoke dị ka m pụrụ ịmata kpọmkwem ihe ga-eme n’ọdịnihu?”+ 16 Juda wee tie mkpu, sị: “Gịnị ka anyị ga-agwa nna m ukwu? Gịnị ka anyị ga-ekwu? Oleekwa otú anyị ga-esi gosi na anyị bụ ndị ezi omume?+ Ezi Chineke achọpụtawo njehie ndị ohu gị.+ Lee, anyị bụ ndị ohu nna m ukwu,+ ma anyị onwe anyị ma onye a hụrụ iko ahụ n’akpa ya!” 17 Otú ọ dị, ọ sịrị: “Tụfịakwa! Agaghị m eme otú a.+ Ọ bụ onye a hụrụ iko ahụ n’akpa ya ga-aghọrọ m ohu.+ Ma ndị nke ọzọ n’ime unu, lakwurunụ nna unu n’udo.”+ 18 Juda wee bịaruo ya nso wee sị: “Nna m ukwu, m na-arịọ gị arịrịọ, biko, ka ohu gị kwuo okwu ná ntị nna m ukwu,+ ka ị gharakwa iweso ohu gị iwe dị ọkụ,+ n’ihi na gị na Fero bụ otu ihe.+ 19 Nna m ukwu jụrụ ndị ohu ya, sị, ‘Ùnu nwere nna ma ọ bụ nwanne?’ 20 Anyị wee sị nna m ukwu, ‘Anyị nwere nna meworo agadi na nwa ọ mụrụ n’agadi ya, bụ́ ọdụdụ nwa+ ya. Ma nwanne ya anwụwo, o wee fọdụ naanị ya n’ime ndị nne ya mụrụ,+ nna ya hụkwara ya n’anya.’ 21 E mesịa, ị gwara ndị ohu gị, sị, ‘Kpọtaranụ m ya ka m hụ ya anya.’+ 22 Ma anyị gwara nna m ukwu, sị, ‘Nwa okoro ahụ apụghị ịhapụ nna ya. Nna ya ga-anwụ+ ma ọ bụrụ na ọ hapụ ya.’ 23 I wee gwa ndị ohu gị, sị, ‘Unu agaghị ahụ ihu m ọzọ, ọ gwụla ma nwanne unu nke ọdụdụ ò so unu gbadata.’+ 24 “O wee ruo na anyị lakwuuru ohu gị bụ́ nna m wee kọọrọ ya ihe nna m ukwu kwuru. 25 E mesịa, nna anyị sịrị, ‘Laghachinụ zụtara anyị obere ihe oriri.’+ 26 Ma anyị sịrị, ‘Anyị enweghị ike ịga. Ọ bụrụ na nwanne anyị nke ọdụdụ esoro anyị, anyị ga-aga, n’ihi na anyị apụghị ịhụ ihu nwoke ahụ ma ọ bụrụ na nwanne anyị nke ọdụdụ esoghị anyị.’+ 27 Ohu gị bụ́ nna m wee sị anyị, ‘Unu onwe unu maara nke ọma na nwunye m mụụrụ m naanị ụmụ nwoke abụọ.+ 28 E mesịa, otu si n’ebe m nọ pụọ, m wee tie mkpu, sị: “Ewoo, ọ ghaghị ịbụ na anụ ọhịa adọriwo ya!”+ ahụbeghịkwa m ya ruo ugbu a. 29 Ọ bụrụ na unu akpọrọkwa onye nke a pụọ n’ihu m, o wee nwụọ n’ihe mberede, unu ga-eme ka m jiri mwute gbadaruo Shiol n’isi awọ́ m.’+ 30 “Ugbu a, ozugbo m gakwuuru ohu gị bụ́ nna m, ya abụrụ na nwa okoro a esoghị anyị, ebe e jikọrọ mkpụrụ obi ya na mkpụrụ obi onye a,+ 31 ihe ga-eme ga-abụ na ozugbo ọ hụrụ na nwa okoro a esoghị anyị, ọ ga-anwụ, n’ezie, ndị ohu gị ga-eme ka ohu gị bụ́ nna anyị jiri mwute gbadaruo Shiol n’isi awọ́. 32 N’ihi na ohu gị ji onwe ya gbaa ibé+ maka nwa okoro a maka oge a ya na nna ya na-anọghị, sị, ‘Ọ bụrụ na mụ akpọlataghịrị gị ya, ọ ga-abụ na mụ emehiewo nna m ruo mgbe ebighị ebi.’+ 33 Ya mere, biko, ka ohu gị nọrọ dị ka ohu nna m ukwu kama nwa okoro a ga-anọ, ka nwa okoro a wee soro ụmụnne ya laa.+ 34 N’ihi na olee otú m ga-esi lakwuru nna m n’akpọghị nwa okoro a wee jiri anya m hụ ọdachi ga-adakwasị nna m?”+